Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Zvita 02, 2021
Masangano anomirira vatori venhau ari kushushikana zvikuru nehurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nePrivate Voluntary Organisations Amendment Act, achiti izvi zvinodzorera shure budiriro yange yavepo zvichitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA).
Mapurisa apihwa mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenhengo yeMDC Alliance VaNyasha Zhambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi wapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kuKariba neChirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawana mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yekare denda iri risati ranetsa munyika.
Hurumende inoti vanhu mazana manomwe negumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro
Mabhanga emuSouth Africa anonyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika kuti zvagadzirise magwaro azvo gore rino risati rapera kutadza kuita izvi, mabhanga aya anovhara mabhuku azvo ekumabhanga,
Vezvematongerwo enyika vozeya mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzema by-election dzichaitwa muna Kurume gore rinouya, uye hapana kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuchaitwa zvakare sezvo Zimbabwe iine mitemo yakanaka kudarika dzimwe nyika nechakare.
Chirongwa chiri kuitwa nesangano reInternational Committee of the Red Cross chiri kubatsira vamwe vanhu vanenge vasisazivikanwi kuti varipi, mushure mekuenda kunoshava kuSouth Africa, kuti vabatanidzwe nehama dzavo.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na 8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi muhupenyu hwavo.